Bit By Bit - Fananganana fiaraha-miasa betsaka - 5.2.2 Vahoaka-Coding ny ara-politika fandaharan'asan'izy
Coding fandaharan'asan'izy ara-politika, zavatra matetika ataon'ny manam-pahaizana, dia azo tanterahana amin'ny alalan'ny olombelona tetikasa computation niafara tamin'ny reproducibility kokoa sy mahavita.
Toy ny Galaxy Zoo, misy toe-javatra marobe izay ahitan'ny mpikaroka ara-tsosialy ny code, sokajy, na marika sary na lahatsoratra. Ohatra iray amin'izany karazana fikarohana izany ny famaritana ny fanambarana politika. Mandritra ny fifidianana, ireo antoko politika dia mamoaka fanambarana milaza ny toerana misy azy sy ny filôzôfia. Ohatra, eto ny ampahany amin'ny fanehoan-kevitry ny Antokon'ny mpiasa any Royaume-Uni tamin'ny taona 2010:
"Olona an-tapitrisany ny olona miasa ao amin'ny panjakana ny hanana ny tsara indrindra soatoavin'ny Grande-Bretagne, manome hery manampy ny olona mba hahatonga ny tena araka ny fiainany sady miaro azy amin'ny loza tokony tsy voatery hiteraka eo ny. Toy ny tokony ho bolder momba ny andraikitry ny governemanta amin'ny fanaovana tsena somary miasa, mila koa isika mba ho sahy fanavaozana ny governemanta. "
Ireo fanehoan-kevitra ireo dia mirakitra ireo angona sarobidy ho an'ireo mpahay siansa politika, indrindra ireo izay mianatra ny fifidianana sy ny fiovan'ny adihevitra politika. Mba hamoahana ny vaovao avy amin'ireo fandaharan-javatra ireo, dia namorona ny Tetik'asa Manifesto ireo mpikaroka, izay nanangona manifestations 4000 avy amin'ny antoko 1 000 tany amin'ny firenena 50 ary avy eo dia nandamina ny siansa politika mba handikana azy ireo ara-dalàna. Ny fehezanteny tsirairay ao amin'ny fanambarana tsirairay dia notondroin'ny manam-pahaizana iray mampiasa tetikady 56 sokajy. Ny vokatr'ity ezaka iombonana ity dia ny angona betsaka amin'ny famintinana ny fampidirana ao anatin'ireny fanambarana ireny, ary io tahiry io dia nampiasaina tao amin'ny taratasy 200 momba ny siansa.
Kenneth Benoit sy ireo mpiara-miasa (2016) nanapa-kevitra ny handray ny tetikasa fanamboarana fanamboarana izay nataon'ireo manam-pahaizana teo aloha ary namadika izany ho tetikasan'ny fanatanterahana ny olombelona. Vokatr'izany dia namorona dingana fandaharam-potoana izay mamerina kokoa sy mavitrika kokoa izy ireo, fa tsy midika hoe lafo sy haingana kokoa.
Niara-niasa tamin'ireo fanambarana 18 novokarina nandritra ny fifidianana enina nifandimby tao Royaume-Uni, Benoit sy ireo mpiara-miasa dia nampiasa ny paikady fampifanarahana mivantana amin'ny mpiasa avy amin'ny tsenan'ny laboratoara microtask (Amazon Mechanical Turk sy CrowdFlower dia ohatra amin'ny tsenan'ny laboratoara microtask, , jereo ny Toko 4). Ireo mpikaroka dia nandray ny fanambarana tsirairay ary nizara izany ho sazy. Avy eo, nisy olona iray nampihatra ny sora-baventy amin'ny fehezanteny tsirairay. Ny mpamaky indrindra dia nangatahana ny hametraka ny fehezanteny tsirairay mikasika ny politika ara-toekarena (ankavia na ankavanana), amin'ny politikam-piarahamonina sosialy (liberal na mpandala ny nentin-drazana), na tsy (na 5.5). Ny fehezanteny tsirairay dia nomarihina olona dimy teo ho eo. Farany, ireo valim-pifidianana ireo dia nampifangaroina tamin'ny fampiasana modely statistika izay nahitana ny vokatra avy amin'ny tsirairay ary ny vokatra sarotra. Amin'ny ankapobeny, Benoit sy ireo mpiara-miasa dia nanangona tombontsoa 200.000 avy amin'ny olona 1,500.
Figure 5.5: Famolavolana koditra avy amin'i Benoit et al. (2016) . Ny mpamaky dia nangatahana mba hametraka ny fehezanteny tsirairay mikasika ny politika ara-toekarena (ankavia na ankavanana), amin'ny politika sosialy (liberaly na mpandala ny nentim-paharazana), na na tsia. Adapted from Benoit et al. (2016) , sary 1.
Mba hanombanana ny kalitaon'ny vahoaka coding, Benoit sy ireo mpiara-miasa aminy koa dia nanana mpanan-kevitra 10-mpampianatra sy mpianatra nahazo diplaomasia momba ny siansa politika - dia mitovitovy amin'ireo filazam-baovao mitovy amin'izany. Na dia avo kokoa noho ny isan'ireo fanamafisam-peo ireo fanamarihana avy amin'ny mpikambana ao amin'ny vahoaka, ny fanombanana ny isan'ireo mpandinika dia nahatsikaritra fifanarahana tamin'ny valin-kafatra avy amin'ny mpandinika (sary 5.6). Ity fampitahana ity dia mampiseho fa, tahaka ny amin'ny Galaxy Zoo, ny tetikasa fanatanterahana ny olombelona dia afaka mamokatra vokatra tsara.
Sary 5.6: Ny tomban'ezaka momba ny toetr'andro ( \_(x\_) -axis) sy ny tombanana ho an'ny olona ( \_(y\_) -axis) dia tao anatin'ny fifanarahana niavaka rehefa nanambara fanambarana ofisialy 18 avy amin'ny United Kingdom (Benoit et al. 2016) . Ny fanambarana notakiana dia avy amin'ny antoko politika telo (Conservative, Labor, ary Liberaly Democrats) ary fifidianana enina (1987, 1992, 1997, 2001, 2005, ary 2010). Adapted from Benoit et al. (2016) , 3.
Ny fanorenana an'io vokatra io, Benoit sy ireo mpiara-miasa dia nampiasa ny rafi-pikirakirana ny vahoaka mba hanao fikarohana izay tsy azo tanterahana amin'ny rafi-koditra manam-pahaizana manokana ampiasain'ny Tetik'asa Manifesto. Ohatra, ny tetikasa Manifesto dia tsy nametraka ny fanambarana mikasika ny resaka fifindra-monina satria tsy lohahevitra goavana izany raha niorina tamin'ny taona 1980 tany ho any ny famolavolana fandaharana. Ary, amin'izao fotoana izao, dia tsy azo avela ho an'ny Tetik'asa Manifesto ny miverina ary mamerina mamoaka ny fanambaran'izy ireo mba hisamborana ity vaovao ity. Noho izany dia toa toa tsy miraharaha ireo mpikaroka liana amin'ny fianarana ny politika ny fifindra-monina. Na dia izany aza, Benoit sy ireo mpiara-miasa dia afaka nampiasa ny rafitra fanaraha-maso nataon'olombelona mba hanaovana io famaritana io-natokana ho an'ny fanontaniana fikarohana-haingana sy mora.
Mba handinihana ny politikan'ny fifindra-monina, dia namoaka ny fanambarana ho an'ny antoko valo tamin'ny fifidianana ankapobeny 2010 tany Royaume-Uni. Ny fehezanteny tsirairay ao amin'ny fanambarana tsirairay dia voatanisa raha misy ifandraisany amin'ny fifindra-monina, na raha izany, na mpifindra-monina, tsy filaminana na fifindra-monina. Tao anatin'ny 5 ora nanombohana ny tetikasany, niditra ny valiny. Nanangona valim-bolo maherin'ny 22.000 izy ireo tamin'ny total $ 360. Ankoatra izany, ny fanombanana avy amin'ny vahoaka dia nampiseho fifanarahana niavaka tamin'ny fanadihadiana teo aloha momba ny manam-pahaizana. Avy eo, ho toy ny fitsapana farany, roa volana taty aoriana, ireo mpikaroka dia namerina namoaka ny fepetran'ny vahoaka. Tao anatin'ny ora vitsivitsy, dia namorona daty vaovao vaovao misy kodiarana vaovao izy ireo izay mifanandrify akaiky ny tahirin-dahatsoratry ny olona voafantina. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fametavetan'ny olombelona dia nahatonga azy ireo hamolavola ny famolavolana lahatsoratra ara-politika izay nifanaraka tamin'ny fanombatombanana ara-tsaina ary azo jerena. Ankoatr'izany, satria haingana sy mora vidy ny fanatanterahana ny olombelona, ​​mora ho azy ireo ny nanamboatra ny angon-draketrany ho an'ny fanadihadiana manokana momba ny fifindra-monina.